Shimbir lagu iibsaday 1.42 milyan oo doolar | Wardoon
Home Somali News Shimbir lagu iibsaday 1.42 milyan oo doolar
Shimbir lagu iibsaday 1.42 milyan oo doolar
Warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadal heysa shimbir lagu iibsaday lacag ka badan Hal Milyan oo Dollar, waxa ayna sheekadan noqotay mid hadal heyn badan abuurtay oo siyaabo kala duwan Warbaahinta wax uga qortay.
Shimbirtan oo nuuceeda aysan dunida ku badneyn oo 5-sano jir ah ayaa lagu iibsaday lacag gaareysa 1.42 milyan oo doolar, waxaana shimbirtan iibsaday nin maalqabeen ah oo u dhashay dalka Shiinaha.
Olole lagu xaraashayay shimbirtan ayaa waxaa kasoo qeyb galay maalqabeeno badan, waxaana qiimihii ugu horreeyay ee lagu soo beec geeyay shimbirtan ay aheyd 321 kun oo doolar, waxaana beeca sare u qaaday tartan loo galay shimbirtan iibkeeda.
Nikolaas Gyselbrecht, oo ah madaxa shirkadda PIPA ee shimbirtan iibineysay ayaa sheegay in aysan marnaba fileyn in lacag intaan la eg lagu iibsan doono shimbirtan, waxa uuna cadeeyay in ay filayeen lacag gaareysa 400 kun oo doolar.
Previous articleDAAWO:- Al-Jazeera Dahabshiil lug ayay kulahayd wareejinta dekeda Berbera
Next articleCiidamo ka tirsan Milateriga Soomaaliya oo oo kasoobaxay Mahadaay, Qalimow, Garsaale
Beesha Caalamka Oo Dalbatay in dhaqsi doorashada looqabto
Gabadh Burco ku sugan oo Su’aal uga yaabsatay Prof. Cali Khaliif+VIDEO